War uu Cumar Finish kasoo saaray Dilkii Gudoomiyaha Hodan oo si weyn loo dhaliilay | Allbanaadir.com
Home NEWS War uu Cumar Finish kasoo saaray Dilkii Gudoomiyaha Hodan oo si weyn...
War uu Cumar Finish kasoo saaray Dilkii Gudoomiyaha Hodan oo si weyn loo dhaliilay
Qoraal uu soo saaray Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa lagu sheegay in gudoomiyaha Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun xalay ku dhintay iska horimaad dhaxmaray ilaaladiisa iyo ciidanka booliiska.
”Marxuumka ayaa Habeenkii xalay abaarihii 2dii iyo daqiiqado lagu dilay inta u dhaxeysa Isgoyska Howlwadaag iyo Isgoyska Jidka Aadan Cadde, kadib markii ay is-rasaaseen dhex martay ciidan halkaasi ku sugnaa, waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay labo askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa, kuwaasi oo eebe loogu baryayo in uu caafimaad deg deg ah siiyo.” ayaa lagu yiri qoraalka uu soo saaray Gudoomiyaha gobolka Banaadir.
Xildhibaan Mahad Maxamad Salaad ayaa si weyn u dhaliilay hadalka kasoo yeeray Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ku aadan in Gudoomiyaha degmada Hodan lagu dilay iska horimaad, waxa uuna xusay in warka cumar finish yahay mid raad tirasho ah.
”Waxaan cambaareynayaa hadalka gafka ah ee ka soo yeeray Gudoomiye Cumar Finish ee ah Gudoomiye Cabdihakiin Dhagajuun is-rasaasayn ayuu ku dhintay. Waxaanan u aragnaa in Gudoomiye Cumar iyo maamulkiisu bilaabeen raadtirasho si loo qariyo raadka dambiileyaasha falkaas geystay, Gaari la hubiyay markii uu gudbayay, soo laabashadiisana loo diyaar garoobay, ciidamo xoojin ahna loo diray sida ay ii sheegeen saraakiisha tagay goobta falku ka dhacay sabab loogu sheego is-rasaasayn ayay ahayd waa wax aan la qaadan karin. Gudoomiye Cumar na waxaan ugu baaqaynaa in uu cudurdaar ka bixiyo hadalkaas” ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaana ku baaqay in sharciga la horkeeno saraakiishii bixisay amarka lagu dilay gudoomiyaha Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun iyo askartii fulisay falkaasi dilka ah.
Previous articleTaliyaal iyo Askar loo xiray dilkii Gudoomiyaha Degmada Hodan iyo Baaritaano bilowday
Next articleR/W Rooble oo ka hadlay Dilka Gudoomiyihii Hodan amarna siiyay Hay’adaha amaanka